Madaxtooyada oo codsatay in la baaro eedeyn uga timid Hanti Dhowraha Qaranka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Xafiiska Xeer Ilaalinta Qaranka ka dalbaday inuu baaritaan degdeg ah ku sameeyo cabasho uu dhawaan jeediyey, warbaahintana uu mariyey Hanti Dhowraha Guud, Dr. Nuur Faarax.
Dr. Nuur Faarax oo 20-kii bishaan shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in maamulka madaxtooyada Soomaaliya uu shaqada xafiiskiisa horjoogsaday.
Haddaba, war uu soo saaray Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya, Daa’uud Aweys ayaa lagu sheegay in madaxtooyadu si weyn uga walaacsan tahay eedeymaha uu soo jeediyey Hantidhowrka Guud ee Qaranka.
Madaxtooyada ayaa ka Xeer Ilaaliyaha Guud ka codsatay inuu degdeg baaritaan ugu sameeyo eedeymahan.
Xafiiska Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegay iney ka go’antahay, mar walbana diyaar u tahay taageerada in si hufan uu u shaqeeyo xafiiska Hantidhowrka Guud.
Hanti Dhowraha Guud ee Qaranka ayaa horay u yiri “Shaqadii Qaranka aan u heynay iyo baaristii aan u heynay waxaa galay hakad, waxaana sabab u ah madaxtooyada iyo askarta maamusha meesha laga soo gala Villa Somalia”.
Hanti Dhowraha Guud ee Qaranka iyo Xeer Ilaaliyaha Guud ayaa horay si wadajir ah u shaaciyey iney musuq ku heleen ilaa 19 wasaaradood.